Milateriga Suudaan iyo Ururada Rayidka ah oo Heshiis Gaaray • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Milateriga Suudaan iyo Ururada Rayidka ah oo Heshiis Gaaray
Milateriga Suudaan iyo Ururada Rayidka ah oo Heshiis Gaaray
Militariga xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir iyo ururada rayidka ah ayaa heshiis ku gaaray in muddo saddex sanno oo kumeel gaar ah ka dib in xilka lagu wareejiyo Xukuumada shibil ah.
Gollaha milaterigu waxay sheegeen in saddex meelmood labo meelood gollaha barlamaanka ee kumeel gaar ahi ay ka imaan doonaan bulshada rayidka iyo xisbiyada mucaraadka ee dalkaasi Suudaan. Gollaha cusub ee barlamaanka ayaa ka kooban 300 xildhibaan.
Shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen milateriga iyo mucaraadka ayaa Gen Yaasir Al-atta waxaa uu sheegay in 24 saac gudahood lagu saxiixi doonoa heshiiska awood qaysbiga, taasi oo ay jirto dhismaha golle cusub oo isku dhaf ah oo Suudaan maamuli doono inta laga gaarayo doorasho.
Satea al-Hajj oo ka tirsan isbahaysiga xisbiyada mucaraadka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in heshiis rasmi ah la gaaray.
Saacado ka hor intii aan lagu dhawaaqin heshiiska, ilaa 5 qof oo mudaharaadayaal ah iyo askari ka tirsan ciidamada amniga ayaa ku dhintay mudharaadyo rabshado wata oo ka dhacay caasimadda Khartuum.